बिना अपरेशन र बिना अस्पताल गई,घरमै यसरी गर्नुहोस् पथ्थरीको उपचार ! यस्ता छन् घरेलु उपचार – Annapurna Daily
On Jun 21, 2021 14,176
एजेन्सी । मृगौला मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग हो । मृगौलाको काम शरीरमा पानीको स्तर र अन्य तरल पदार्थ, केमिकल स्तर सही राख्नु र हानिककारक पदार्थ बाहिर निकाल्नु हो ।
आउनुहोस् जानौँ कुन कुन हुन् ती उपाय ? प्रसस्त मात्रामा पानी : मानव शरीरमा ७० प्रतिशत पानी छ। पानीको कमीले शरीरमा विभिन्न किसिमको नोक्सान पुग्न सक्छ। कुनै पनि सामान्य व्यक्तिले दिनमा करिब २ देखि ३ लिटर पानी पिउन आवश्यक छ। तपाईले जति पानी पिउनुहुन्छ। पिसावबाट तपाईको शरीरमा उतिधेरै विकार पदार्थ बाहिर निस्किन्छन्। मृगौलामा पत्थरीको समस्या छ भने पनि तपाईले धेरै पानी पिएर त्यसलाई बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने गर्छ।